Cholecystitis - एक सुनिंनु को पित्त थैली, आफ्नो मोटर कार्यहरु को उल्लंघन सँगसँगै छ जो। क्लिनिकल manifestations दुखाइ र एक निश्चित समावेश सही माथिल्लो वृत्त को चतुर्थ मा heaviness, उनको घटना रक्सी सेवन वा धेरै फैटी खाद्य पदार्थ हो। दौरा शामिल अक्सर तीता र सुक्खा मुख, वाकवाकी र उल्टी सँगसँगै। Comorbidities cholecystitis enterocolitis, गैस्ट्रो, pancreatitis छन्। पुरानो cholestasis को bile मा पत्थर को गठन, साथै विकास प्रचार सक्छ cholecystitis calculouse।
पुरानो cholecystitis - को पित्त थैली को सुनिंनु जस्तै हो, तर पनि एक आवर्तक भएको पुरानो। यो अक्सर bile को excretion सम्बन्धित विकार को एक किसिम संग संयुक्त छ।
पुरानो cholecystitis र यसको लक्षण
पुरानो cholecystitis विकास एकदम लामो समय भित्र हुन्छ, र वृद्घि निरन्तर छूट को अवधि संग वैकल्पिक। दायाँ माथिल्लो वृत्त को चतुर्थ - पुरानो cholecystitis को मुख्य लक्षण एक प्रकृतिका aching, सामान्य गंभीर छ कि दुखाइ, र यसको स्थानीयकरण को स्थान हो। दुखाइ धेरै हप्ता सम्म पछिल्लो सक्छ। पुरानो cholecystitis मा रक्सी को अर्को सेवन पछि दुखाइ को विशेषता लक्षण, Carbonated पेय, तेल वा मसलादार खाना पाउन। पुरानो cholecystitis को Exacerbation आहार, तनाव र hypothermia अनियमितताहरु कारण हो।
दुखाइ लक्षण बाहेक विरामीहरु प्राय belching, मुख तीतो स्वाद, वाकवाकी र उल्टी चिनो।
पुरानो cholecystitis र यसको उपचार
लगभग सधैं, पुरानो cholecystitis conservatively Gastroenterologist उपचार। तीव्र उपचार को अवधि को तीव्र निकासी लक्षण मा विशेष निर्देशित छ महिनामा, रोगी एंटीबायोटिक उपचार, detoxification र पाचन समारोह को रिकभरी प्रयोग पनि संक्रमण सुधार्नको साइट निर्दिष्ट गरिएको छ।
गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ एजेन्ट को समूह स्वामित्वको सुनिंनु र पीडा प्रयोग राहत लागूपदार्थ राहत गर्न। को ducts र gallbladder, वा बरु यसको चिल्लो मांसपेशीमा को Spasm, antispasmodics राहत।
नामेट गर्न bile को ठहराव सम्पूर्ण biliary पर्चा motility को बलियो बनाउँछ योगदान कि प्रयोग लागूपदार्थ। तिनीहरूले ठहराव को वृद्घि हुन र दुखाइ वृद्धि गर्न सक्छन् bile को secretion बृद्धि गर्न मद्दत गर्ने औषध, चरम सावधानी प्रयोग गरिएको।
विभिन्न जडीबुटी (chamomile, डेन्डेलिओन, valerian, पुदिना, marigold) को एक decoction: exacerbations समयमा uncomplicated पुरानो cholecystitis को उपचार मा हर्बल मेडिसिन विधिहरू लागू हुन्छ।
आहार पुरानो cholecystitis, मैग्नीशिया, संग tyubazh sorbitol वा xylitol - छूट मा सिफारिस गरिएको विरामीहरु। पुरानो cholecystitis को Phytotherapy decoctions yarrow, marshmallow, buckthorn, tansy लिएर समावेश छ। Reflexology माटोको CMT-उपचार, electrophoresis, आदि: लागू physiotherapeutic उपचार मा।
मामला मा पुरानो cholecystitis calculouse को को gallbladder को अर्थात् हटाउने - विशेष सर्जरी देखाइयो। contraindications सर्जरी को मामला lithotripsy (आघात-लहर) को प्रयोग गरेर गैर-शल्य भंग पत्थर को सिफारिस विधि मा, तर यो मामला मा यो पत्थर को खण्डीकरणको क्रमलाई एक उपचार गर्न नेतृत्व छैन भन्ने बुझे गर्नुपर्छ, र यो चाँडै आफ्नो गठन दोहोरिन हुनेछ सम्भव छ।
त्यहाँ तयारी ursodeoxycholic एसिड र लवण henodezoksiholievoy प्रयोग जलाएर पत्थर दबाइ विधि अर्को प्रविधी छ, तर यो उपचार पनि लगभग दुई वर्ष लाग्छ, र पूर्ण उपचार गर्न नेतृत्व गर्दैन। यो उपचार त्यहाँ समय पत्थर फेरि विकास छैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
Pelvic अल्ट्रासाउंड - छानबिन प्रभावकारी विधि
Colm खस्छ। हामी रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था संग संघर्ष गर्दै छन्
र आफ्नो पहिलो-सहायता किरा मा घाउ को छिटो निको लागि एक मलम छ?
भर्ना, अध्ययन: रूसी विश्वविद्यालयहरु मा मनोविज्ञान को विभाग
क्याथरीन को नाम के हो, र प्रकृति कसरी दिन्छ?
कसरी लगानी बिना इन्टरनेटमा विज्ञापन हेर्दै पैसा बनाउने? यो विज्ञापन हेर्दै पैसा बनाउन सम्भव छ?
"एक लाखमा प्रेम": श्रृंखलाको अभिनेता र विशेषताहरू